Daawo: Sidee loo sameeyaa xisaabta canshuurta oo lacag looga soo ceshadaa Skatterverket? | Somaliska
Kama dambeys bisha May 02 waxaa waajib ah dhamaan dadka ku nool Sweden ee bixiyay canshuurta sanadkii tagay in ay saxiixaan warqadaha cadeynta canshuurta (Skattedeklaration) ee ay soo dirtay Skatteverket. Hadaba sidee loo buuxiyaa warqadahaas? Waa macay waxyaabaha kala duwan ee aad ka faa’idaysan karto canshuur celinta?
Asxaabteena Somali Multimedia Center ee uu ugu horeeyo Ibrahim Jama ayaa soo diyaariyay barnaamij xiiso badan kaasoo ay wareysi ay la yeesheen mid ka mid ah sargaalada Soomaalida ah ee ka hawlgala Skatterverket. Daawasho wacan oo ka faa’idayso.
Qaraxyo ka dhacay Stockholm (War Cusub)